Isha laga leexday: maxay tahay, kala duwanaanshaha toosan, iyo waxa loogu talagalay | Qalab bilaash ah
Isaac | 01/10/2021 09:00 | La cusbooneysiiyay 07/09/2021 09:52 | Qaybaha elektarooniga ah
Una isha laga wareejiyay waa aalad elektaroonik ah oo awood u leh inay beddesho tamarta korontada iyada oo loo marayo taxane ah qaybaha korontada, sida transistor -ka, jaangooyeyaasha danab, iwm. Taasi waa, waa a korantada, laakiin leh kala duwanaansho marka loo eego kuwa toosan. Ilahaas ayaa sidoo kale loo yaqaan SMPS (Beddelka Awoodda Beddelka Habka), waxaana hadda loo adeegsadaa codsiyo fara badan ...
1 Waa maxay korontada
2 Ilaha toosan iyo ilaha la beddelay: kala duwanaanshaha
4 Noocyada ilaha
Waa maxay korontada
Una korontada, ama PSU (Unugga Awoodda), waa aalad loo isticmaalo in korontada si habboon loo gaarsiiyo qaybaha ama nidaamyada kala duwan. Ujeeddadiisu waa in laga helo tamarta shabakadda korantada oo loo beddelo danab ku habboon iyo hadda si qaybaha ku xiran ay si habboon u shaqeyn karaan.
Awoodda korontadu kaliya ma beddeli doonto korantada wax -soo -saarkeeda marka loo eego soo -jeedinteeda, laakiin waxay kaloo wax ka beddeli kartaa xoogeeda, hagaaji oo xasili si aad uga beddesho mid kale oo u beddelaya mid hadda socda. Taasi waa waxa ka dhacaya ilaha kombiyuutarka, tusaale ahaan, ama adapter -ka si aad lacag uga qaadato batteriga. Xaaladahan, ee CA waxay ka socon doontaa sida caadiga ah 50 Hz iyo 220 / 240v, una aado DC 3.3v, 5v, 6v, 12v, iyo wixii la mid ah ...
Ilaha toosan iyo ilaha la beddelay: kala duwanaanshaha
Haddii aad xasuusato adapters ama xeedho taleefoonadii hore, way ka weynaadeen oo ka cuslaayeen. Kuwani waxay ahaayeen sahayda korontada tooska ah, halka kuwa maanta ka fudud iyo kuwa aadka u kooban ay bedelayaan sahayda korontada. Kala duwanaanshaha:
In a farta toosan xiisadda korontada waxaa lagu yareeyaa iyada oo loo adeegsanayo transformer, si hadhow loo saxo ilaahyada. Waxa kale oo lahaan doona marxalad kale oo leh capacitors elektrolytka ama dejiyeyaasha danab kale. Dhibaatada ka dhalata qalabka koronto -dhaliyaha ayaa ah luminta tamarta oo ah qaab kuleyl oo sabab u ah transformer -ka. Intaa waxaa dheer, transformer -ku ma aha oo kaliya inuu leeyahay xudunta biraha culus oo aad u weyn, laakiin durdurrada wax -soo -saarka sare waxay u baahan doonaan dabayl naxaas ah oo aad u qaro weyn, sidaas oo kale waxay kordhineysaa miisaanka iyo cabbirka.
ka ilaha wareejiyay Waxay adeegsadaan mabda'a la mid ah geedi socodka, laakiin waxay leedahay kala duwanaansho. Tusaale ahaan, xaaladahaan waxay kordhiyaan inta jeer ee hadda jirta, iyagoo ka socda 50 Hz (Yurub), ilaa 100 Khz. Taas macnaheedu waa in khasaaruhu yaraado oo cabbirka transformer -ka si weyn loo yareeyo, marka waxay noqon doonaan kuwo fudud oo is -haysta. Si ay taasi u suurtagasho, waxay AC ugu beddelaan DC, ka dibna DC u beddelaan AC oo leh soo noqnoqosho ka duwan tii hore, ka dibna waxay AC u beddeleen DC.
Maanta, sahayda korontada toosan waa ficil ahaan waa la waayey, culayskeeda iyo baaxadeeda awgeed. Hadda la beddelay ayaa loo adeegsadaa dhammaan noocyada kala duwan ee codsiyada.
Sidaa darteed, the waxyaabaha muhiimka ah iyada oo ku xidhan habka aasaasiga ah ee shaqada, waxay yihiin:
El cabirka iyo culeyska kuwa toosan waxay noqon karaan kuwo muhiim ah, oo ilaa 10 kg mararka qaarkood. Halka kuwa la beddelay, miisaanku wuxuu noqon karaa dhowr garaam oo kaliya.
Marka laga hadlayo Danab wax soo saarka, ilaha toosan ayaa nidaamiya wax -soo -saarka iyaga oo isticmaalaya danabyo ka sarreeya heerarkii hore ka dibna soo saara danab hoose marka ay soo saaraan. Marka la eego kuwa la beddelay, waxay noqon karaan kuwo siman, ka hooseeya, oo xitaa ka rogan kuwa soo -gelinta, taasoo ka dhigaysa mid aad u badan.
La hufnaan iyo kala daadasho Waxa kale oo ay ku kala duwan tahay, maadaama kuwa la beddelay ay aad u karti badan yihiin, si fiicanna u isticmaalaan tamarta, oo aanay u kala bixin kulayl badan, sidaa darteed uma baahnaan doonaan hababka qaboojinta ee waaweyn.
La kakanaanta xoogaa wuu ka sarreeyaa bedelka sababta oo ah tirada badan ee marxaladaha.
Xarfaha toosan ma soo saaraan is dhexgalka guud ahaan, sidaa darteed waxay ugu fiican yihiin marka faragelinta aysan dhicin. Kan la beddelay wuxuu ku shaqeeyaa jadwalka sare, taasina waa sababta aysan ugu fiicnayn dareenkan.
El qodobka awoodda ilaha toosan wuu hooseeyaa, maxaa yeelay awoodda waxaa laga helaa meelaha ugu sarreeya ee korontada. Tani ma aha kiiska kuwa la beddelay, in kasta oo marxalado hore lagu daray si loo saxo dhibaatadan si weyn, gaar ahaan aaladaha lagu iibiyo Yurub.
Si aad si fiican u fahanto hawlgalka ilaha beddelashada, marxaladihiisa kala duwan waa in loo qorsheeyaa sidii baloogyo, sida ka muuqata sawirka hore. Baloogyadani waxay leeyihiin shaqadooda gaarka ah:
Sifeey 1: waxay mas'uul ka tahay baabi'inta dhibaatooyinka shabakadda korantada, sida buuqa, iswaafajinta, ku -meelgaarka, iwm. Waxaas oo dhami waxay carqaladayn karaan hawlgalka qaybaha tamarta leh.
Dib -u -hagaajiye: shaqadeedu waa inay ka hortagto in qayb ka mid ah signalada sinusoidal -ka ay dhaafto, taas oo ah, hadda waxay u gudubtaa hal jiho oo kaliya, taasoo dhalisa mawjad qaab garaaca wadnaha ah.
Iskuduwaha qodobka awoodda: haddii hadda ay tahay mid ka baxsan wajiga marka loo eego danab, dhammaan awoodda shabakadda si fiican looma adeegsan doono, oo hagaajiyuhu wuxuu xalliyaa dhibaatadan.
Kondensarka- Awood -siiyayaashu waxay dejin doonaan signalada garaaca wadnaha ee ka soo baxaya marxaladdii hore, keydinaysa qarashka oo ka dhigaysa inay ka soo baxdo si aad u qurux badan, oo u dhow signalada joogtada ah.
Transistor / Controller: waxay u dhaqantaa sidii koontaroolidda marinka hadda jira, goynta iyo dhaqaajinta marinka, kaas oo u beddelaya hirarkii hore ee ku dhowaad hore u noqon jiray mid ruxmaya. Wax walba waxaa xakamayn doona koontaroolaha, kaas oo sidoo kale u dhaqmi kara sidii qayb ilaalin ah.
Diode: waxay u beddeli doontaa hirarka is -beddelaya ee ka soo baxaya transformer -ka si ay u garaacaan.
Sifeey 2: waxay ka soo baxdaa garaaca garaaca ilaa mar kale oo joogto ah.
Optocoupler: waxay ku xiriirin doontaa wax soo saarka isha wareegga kontoroolka si loo helo sharci sax ah, oo ah nooc jawaab celin ah.
Ilaha la beddelay waxaa loo qaybin karaa afar noocyada aasaasiga ah:
Soo -gelinta AC / soo -saarka DC: Waxay ka kooban tahay hagaajiye, isu -beddel, beddeleye, hagaajiye wax -soo -saar iyo shaandheyn. Tusaale ahaan, korontada PC.
Soo gelinta AC / soosaarka AC: waxay si fudud uga kooban tahay inverter soo noqnoqda iyo baddalka soo noqnoqda. Tusaalaha dalabka wuxuu noqon doonaa wadista mootada korontada.
Soo gelinta DC / soosaarka AC: Waxaa loo yaqaanaa maalgaliye, mana badna sidii kuwii hore. Tusaale ahaan, waxaa laga heli karaa matoorrada 220v at 50Hz batteriga.
Soo -gelinta DC / soo -saarka DC: waa danab ama beddel hadda. Tusaale ahaan, sida qaar ka mid ah xeedhoyaasha batteriga ee aaladaha mobilada ee lagu isticmaalo baabuurta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Qaybaha elektarooniga ah » Isha laga leexday: maxay tahay, kala duwanaanshaha toosan, iyo waxa loogu talagalay